Chineke Ọ̀ Na-eji Nsogbu Ndị Anyị Na-enwe Ata Anyị Ahụhụ?
Ụlọ Nche | Nke 3 n'Afọ 2018
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Serbia) Romany (Vlax, Russia) Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
E NWERE OTU NWATAKỊRỊ NA-ETE ỤKWỤ. AHA YA BỤ LUZIA. Mgbe ọ dị obere, o butere ọrịa polio. Mgbe ọ dị afọ iri na isii, otu nwaanyị ọ rụụrụ ọrụ gwara ya, sị: “Chineke kwarụrụ gị ụkwụ iji taa gị ahụhụ maka isi ị na-enupụrụ mama gị.” Ihe a gbawara Luzia obi. Mgbe ọtụtụ afọ gachara, Luzia ka na-echeta otú obi si gbawaa ya maka ihe ahụ ọ gwara ya.
MGBE A GWARA OTU NWAANYỊ AHA YA BỤ DAMARIS NA O NWERE ỌRỊA KANSA N’ỤBỤRỤ, papa ya jụrụ ya, sị: “Gịnị ka i metara? Ọ ga-abụrịrị na o nwere ihe ọjọọ i mere. Ọ bụ ya mere Chineke ji ata gị ahụhụ.” Ihe a nna Damaris kwuru gbawara ya obi.
Ọ dịla anya ndị mmadụ chewere na Chineke ji ọrịa ata ndị mmadụ ahụhụ. Akwụkwọ bụ́ Manners and Customs of Bible Lands kwuru na ọtụtụ ndị n’oge ndịozi Jizọs kweere na “ihe mere mmadụ ji arịa ọrịa bụ mmehie o mere ma ọ bụkwanụ nke onye ikwu ya mere, nakwa na e ji ọrịa ata onye ahụ ahụhụ n’ihi mmehie ahụ.” Otu akwụkwọ bụ́ Medieval Medicine and the Plague kwuru na n’ihe dị ka narị afọ asaa gara aga, “ụfọdụ ndị kweere na Chineke ziteere ha ọrịa iji taa ha ahụhụ maka mmehie ha”. Mgbe ahụ ọtụtụ nde mmadụ nwụrụ n’ihi ọrịa na-efe efe kpara mkpamkpa na Yurop n’ihe dị ka narị afọ asaa gara aga, Chineke ò ji ya taa ndị ọjọọ ahụhụ? Ka ọ̀ bụ ihe ndị dọkịta mechara chọpụta, ya bụ, na ọ bụ nje kpatara ya? Ụfọdụ nwere ike ịjụ ma ọ̀ bụ eziokwu na Chineke ji ọrịa ata ndị mmadụ ahụhụ maka mmehie ha? *
CHEGODỊ IHE A: Ọ bụrụ na ọrịa na ahụhụ ndị anyị na-ata bụ ihe Chineke ji ata anyị ahụhụ, gịnị mere Jizọs, Ọkpara Chineke, ji gwọọ ndị ọrịa? Ọ́ gaghị apụta na Jizọs na-azọ ndị nna ya na-ata ahụhụ, na-agbakwa ha ume inupụrụ Chineke isi? (Matiu 4:23, 24) O nweghị mgbe Jizọs ga-eme ihe megidere ihe Chineke na-eme. Jizọs kwuru, sị: “M na-eme ihe dị ya mma mgbe niile.” O kwukwara, sị: “Ọbụna dị ka Nna m nyere m iwu ka m mee, otú ahụ ka m na-eme.”—Jọn 8:29; 14:31.
Ihe Baịbụl kwuru doro anya. Ọ sịrị na ‘ikpe na-ezighị ezi adịghị n’ebe Jehova Chineke nọ.’ (Diuterọnọmi 32:4) Dị ka ihe atụ, o nweghị mgbe Chineke ga-eme ka ụgbọelu kpọkaa, gbuo ọtụtụ narị mmadụ nọ n’ime ya n’ihi na ọ chọrọ ịta otu onye n’ime ha ahụhụ. Ebreham, onye ji obi ya niile fee Chineke, kwuru na o nweghị mgbe Chineke ‘ga-ekpochapụkọta ndị ezi omume na ndị ajọ omume,’ n’ihi na ọ bụ onye ezi omume. Ọ sịrị: ‘Tụfịakwa! Ọ gaghị eme otú a.’ (Jenesis 18:23, 25) Baịbụl kwukwara na “Chineke adịghị eme ihe ọjọọ.” Ọ naghị ‘eme ihe n’ụzọ na-ezighị ezi.’—Job 34:10-12.
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI BANYERE NSOGBU ANYỊ NA-ENWE
Chineke ejighị nsogbu ndị anyị na-enwe ata anyị ahụhụ maka mmehie anyị. Ihe Jizọs kwuru gbasara okwu a doro anya. Mgbe ya na ndị na-eso ụzọ ya na-agafe, ha hụrụ otu nwoke kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya. “Ndị na-eso ụzọ ya wee jụọ ya, sị: ‘Rabaị, ònye mehiere, ọ̀ bụ nwoke a ka ọ̀ bụ ndị mụrụ ya, nke mere o ji kpuo ìsì mgbe a mụrụ ya?’ Jizọs zara, sị: ‘Ma nwoke a ma ndị mụrụ ya emehieghị, kama ọ bụ ka e wee mee ka ọrụ Chineke pụta ìhè n’ebe ọ nọ.’”—Jọn 9:1-3.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị n’oge ahụ kweere na ọrịa bụ ihe Chineke ji ata mmadụ ahụhụ, ọ ga-abụ na o juru ndị na-eso ụzọ Jizọs anya mgbe ọ gwara ha na ọ bụghị mmehie nwoke ahụ ma ọ bụ nke ndị mụrụ ya mere o ji kpuo ìsì. Jizọs gwọrọ nwoke ahụ, si otú ahụ mee ka o doo anya na Chineke anaghị eji nsogbu ndị na-abịara anyị ata anyị ahụhụ. (Jọn 9:6, 7) Taa, obi ga-atọ ndị na-arịa ezigbo ọrịa ụtọ ịmara na ọrịa ha esighị Chineke n’aka.
Ọ bụrụ na Chineke ji ọrịa na-ata mmadụ ahụhụ, gịnị mere Jizọs ji gwọọ ndị ọrịa?
Baịbụl kwuru, sị:
“A pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ya onwe ya adịghịkwa anwa onye ọ bụla.” (JEMS 1:13) N’eziokwu, n’oge na-adịghị anya a ga-ewepụ “ihe ọjọọ” ndị nọ na-enye ụmụ mmadụ nsogbu kemgbe ọtụtụ afọ. Ụfọdụ n’ime ha bụ ọrịa, ahụ́ mgbu, na ọnwụ.
Jizọs Kraịst ‘gwọrọ ndị niile ahụ́ na-adịghị mma.’ (MATIU 8:16) Mgbe Ọkpara Chineke gwọrọ ndị niile a kpọtaara ya, o gosiri ihe Alaeze Chineke ga-eme n’ụwa niile ma o bido chịwa ụwa.
“Ọ [ya bụ, Chineke] ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile agabigawo.”—MKPUGHE 21:3-5.
ÒNYE NA-AKPATA AHỤHỤ NIILE ANYỊ NA-ATA?
Gịnị meziri ụmụ mmadụ ji atagbu onwe ha n’ahụhụ? Ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ a kemgbe ọtụtụ afọ. Ebe ọ bụ na ahụhụ anyị na-ata esighị Chineke n’aka, ònyekwanụ ka o si n’aka? A ga-aza ajụjụ ndị a n’isiokwu na-eso nke a.
^ para. 4 Ọ bụ eziokwu na o nweela mgbe Chineke nyere ndị mmadụ ntaramahụhụ maka mmehie ha mere, Baịbụl ekwughị na Jehova na-eji ọrịa ma ọ bụ ọdachi ata mmadụ ahụhụ maka mmehie ya.
Ònye Ka Ahụhụ Anyị Na-ata Si n’Aka?
Baịbụl kwuru ihe atọ na-eme ndị mmadụ ji ata ahụhụ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Chineke Ọ̀ Na-eji Nsogbu Ndị Anyị Na-enwe Ata Anyị Ahụhụ?
“Olee Ebe Chineke Nọ Mgbe Ihe A Na-eme?”
Chineke Ọ̀ Ma na Ị Nọ?
Chineke Ọ̀ Na-aghọta Gị?
Chineke Ọ̀ Na-emetere Anyị Ebere?
Chineke Ga-eme Ka Ahụhụ Niile Kwụsị n’Oge Na-adịghị Anya
Olee Otú Obi Na-adị Chineke ma Ọ Hụ Ka Ị Na-ata Ahụhụ?
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Ihe Banyere Gị Ọ̀ Na-emetụ Chineke n’Obi?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Ihe Banyere Gị Ọ̀ Na-emetụ Chineke n’Obi?
Ihe Banyere Gị Ọ̀ Na-emetụ Chineke n’Obi?
ỤLỌ NCHE Ihe Banyere Gị Ọ̀ Na-emetụ Chineke n’Obi?
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Ọrịa Ndị Zuru Ụwa Ọnụ?